रूसले ग्यास ठप्प पारिदिएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले के भने ? — Imandarmedia.com
रूसले ग्यास ठप्प पारिदिएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले के भने ?
काठमाडौं। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले ग्यास र व्यापारलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। रुसले ग्यास आपूर्ति रोकेर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिरहेको जेलेन्स्कीले आरोप लगाएका छन्।
युक्रेनका राष्ट्रपतिको भनाइ यस्तो बेला आएको हो जब रुसले बुधबार पोल्याण्ड र बुल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको थियो। दुवै देशले रुबलमा पैसा तिर्न अस्वीकार गरेका कारण रुसले यो कदम चालेको दाबी गरेको छ।
रुसको यो कदमको चर्को आलोचना भइरहेको छ। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेनले केही युरोपेली देशहरूलाई ग्यास आपूर्ति रोक्न रुसको निर्णय ब्ल्याकमेल गर्ने हतियार भएको बताएकी छिन्।
उनले रुसको यो निर्णय अनुचित र अस्वीकार्य भएको बताइन्। यसबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने राष्ट्रका रूपमा रुसको अविश्वसनीयता देखिएको उनले बताइन्।
रुसको ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले रुबलमा पैसा तिर्न अस्वीकार गरेको कारण पोल्याण्ड र बुल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको बताएको छ।
अर्कोतर्फ, पोल्याण्डको ग्यास आपूर्ति गर्ने कम्पनी पीजीएनआईजीले ग्यासप्रोमले ग्यास आपूर्ति रोकेर सम्झौता उल्लंघन गरेको जनाएको छ । कानूनी माध्यमबाट क्षतिपूर्ति पाउन प्रयास गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
त्यस्तै, युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डर लेनले केही युरोपेली देशहरूलाई ग्यास आपूर्ति रोक्ने रुसको निर्णय ब्ल्याकमेल गर्ने हतियार भएको बताएकी छिन्। उनले रुसको यो निर्णय अनुचित र अस्वीकार्य भएको बताइन् ।
यसबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने राष्ट्रका रूपमा रुसको अविश्वसनीयता देखिएको उनले बताइन् । रुसको ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले रुबलमा भुक्तानी तिर्न अस्वीकार गरेको कारण पोल्याण्ड र बुल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको बताएको छ।
युरोपेली आयोगकी प्रमुखले भनिन्, ईयू सदस्य राष्ट्रहरूसँग आपतकालीन योजना छ। उनले युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था र भण्डारणको राम्रो स्तर उपलब्ध गराउन युरोपेली आयोग सदस्य राष्ट्रहरूसँग सम्पर्कमा रहेको बताइन् ।
यसैबीच रुसका एक शीर्ष सांसदले रुसी कम्पनीले ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने सही निर्णय गरेको बताएका छन् । रुसी संसदको तल्लो सदनका सभामुख व्याचेस्लाभ भोलोडिनले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा रुसले आफ्ना मित्र नभएका अन्य देशलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, पोल्याण्डको ग्यास आपूर्ति गर्ने कम्पनी पीजीएनआईजीले ग्यासप्रोमले ग्यास आपूर्ति रोकेर सम्झौता उल्लंघन गरेको जनाएको छ । कानूनी माध्यमबाट क्षतिपूर्ति पाउन प्रयास गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
रुसको यो कदमप्रति बेलायतले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । बेलायतका उपप्रधानमन्त्री डोमिनिक रोबले ग्यास आपूर्तिमा कटौती गर्ने निर्णयले रुसले आफूलाई थप एक्लो बनाएको बताएका छन् । स्काई न्यूजसँगको कुराकानीमा उनले रुसमा यसको उल्टो असर पर्ने दाबी गरे।